Abenzi baseChina KZ Series Petrochemical Process Pump Presentation nabaphakeli | IKAIQUAN
Isethulo se-KZ Series Petrochemical Process Pump
La mapampu ochungechunge afanele ukudlulisa uketshezi oluhlanzekile noma oluncolile olungathathi hlangothi noma oluncane olungenazinhlayiya eziqinile. Lolu futha lochungechunge lusetshenziselwa ukucwenga uwoyela, imboni ye-petrochemical, imboni yamakhemikhali, ukucubungula amalahle, imboni yamaphepha, imboni yolwandle,
imboni yamandla, ukudla nokunye.
umthamo Q: 0.5 ~ 3000m3 / h
Inhloko H: 4 ~ 230m
Ingcindezi yomsebenzi (p): inani eliphakeme lingaba ngu-7.5MPa.
Ukushisa komsebenzi (t): -45 ~ + 400
I-API610 th8 / th9 / th10 / th11 design standard
La mapampu ochungechunge afanele ukudlulisa hlangothi noma kancane ngokungcoliswa okungathathi hlangothi noma okuncane uketshezi olonakalisayo ngaphandle kwezinhlayiya eziqinile. Le phampu yochungechunge isetshenziselwa ukucwenga uwoyela, imboni ye-petrochemical, imboni yamakhemikhali, ukucubungula amalahle, imboni yamaphepha, imboni yolwandle, imboni yamandla, ukudla, ikhemisi, ukuvikelwa kwemvelo njalonjalo.
I-KZA petrochemical centrifugal process pump ihambisana ne-AOI610 ejwayelekile ngakho-ke kunezici ezithile ngezansi:
1) Isakhiwo sePump sinokwethenjelwa futhi siphephile futhi ukusebenza kwepompo kuzinzile.
2) Ukusebenza kahle kwepompo ngokwesilinganiso kuphakeme ngokulondolozwa kwamandla aphansi.
3) Ukusebenza kwe-pump cavitation kuhle futhi kungcono kakhulu kunemikhiqizo efanayo. Inani eliphansi le-cavitation lingaba ngu-0.5m wemikhiqizo eminingi, okwamanje, inani le-NPSHr lomkhiqizo ojwayelekile cishe liyi-1m. I-NPSHr ephansi isho ukufakwa kwepompo ephansi ukuze iphampu ye-KZA isho izindleko ezincanyana zokwakha.
I-4) Ububanzi bokusebenza kwePump bubanzi futhi umthamo omkhulu ungaba yi-3000m3 / h futhi ikhanda eliphakeme lingaba yi-230m, okwamanje, umthamo wepompo namakhanda ekhanda kuvaliwe ukuze kube lula ukukhetha ipompo.
5) Kunezindlela ezintathu zokupholisa ezithwala, ukupholisa umoya, ukupholisa fan nokupholisa amanzi ngokuya ngamazinga okushisa wepompo ahlukile. Ukupholisa kwe fan ikakhulukazi kufanelekile ezindaweni ezingenawo amanzi ahlanzekile.
6) Ukwenza imigomo ejwayelekile neyunivesithi kuphezulu. Ngaphandle kwezingxenye ezijwayelekile ezijwayelekile, impeller nomzimba ophetheyo we-KZA ne-KZE ungashintshaniswa.
I-7) Impahla yezingxenye zamanzi ikhethwe kusuka kumazinga we-API ngokuya ngesimo somsebenzi noma kumakhasimende.
8) Impeller evulekile nayo yenzelwe lolu phampu lochungechunge ngezimo zomsebenzi ezahlukahlukene.
Inkampani yethu ithole isitifiketi sekhwalithi ye-ISO9001 Futhi kukhona uhlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi ngesikhathi sokuklanywa kwepompo nenqubo ukuze ikhwalithi iqinisekiswe.
Ibanga lokusebenza: Amandla Q = 0.5 ~ 3000m3 / h, iNhloko H = 4 ~ 230m
Ingcindezi yomsebenzi (p): ingaba yi-2,5MPa (ehlobene nokushisa kwempahla nomsebenzi, okukhonjiswa njengomdwebo PT)
Izinga lokushisa lomsebenzi (t): -45 ~ + 180
Ijubane elijwayelekile (n): 2950r / min no-1475r / min
La mapampu ochungechunge afanele ukudlulisa uketshezi oluhlanzekile noma oluncolile olungathathi hlangothi noma oluncane olungenazinhlayiya eziqinile. Le phampu yochungechunge isetshenziselwa ukucwenga uwoyela, imboni ye-petrochemical, imboni yamakhemikhali, ukucubungula amalahle, imboni yamaphepha, imboni yolwandle, imboni yamandla, ukudla, ikhemisi, ukuvikelwa kwemvelo njalonjalo.
2. KZE KZEF
Iphampu yenqubo ye-KZE, KZEF Petrochemcial centrifugal yenziwe ngokuhambisana ne-API610 ngakho-ke kunezici ezingezansi:
Ukusebenza ububanzi: Amandla Q = 0.5 ~ 3000m3 / h, Inhloko H = 4 ~ 230m
Ingcindezi yomsebenzi (p): KZE 2,5MPa KZEF 7.5MPa (ehlobene nokushisa kwempahla nomsebenzi, okukhonjiswa njengomdwebo PT)
Izinga lokushisa lomsebenzi (t): -45 ~ + 400
Langaphambilini VCP Series Kuqondile ephendulwa Pump
Olandelayo: I-KCZ Series Chemical Industry Process Pump
Iphampu ye-Multistage Centrifugal
Iphampu ye-Multistage Double Suction Centrifugal
Iphampu ye-Stainless Steel Multistage Centrifugal
Kuqondile Inline Multistage Centrifugal Pump
Kuqondile Multistage Centrifugal Pump
Amaphampu we-AY Series Centrifugal Oil
I-KQA Series Multistage Pump ene-Axial Spilling Casing
KGD / KGDS Series Kuqondile Pipe Pump
I-KD / KTD Series Multistage Centrifugal Pump
I-KCZ Series Chemical Industry Process Pump
I-KDA Series Petrochemical Process Pump